पत्नीका निम्ति के हो र जेलको पर्खाल !
राजेन्द्र स्थापित जोन पी. क्यारोलको जन्म अमेरिकाको बोस्टन शहरमा सन् १८८२ मा भयो । सानोतिनो चोरीमा मन रमेन, बैंक लुट्ने, ठूला व्यापारी र सम्पन्न व्यक्तिको घरमा डाँका डाल्ने, रेल रोकेर लुटपाट गर्नेजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न हुन थाले । दिउँसै व्यस्त शहरको घर र पसलमा लुटपाट गर्थे । प्रहरीले लखेटे पनि छलेर भाग्थे । जोनको यो अपराधमा पत्नी मेबल उर्फ एलिजाबेथ लेन पनि सामेल थिइन् ।… विस्तृत समाचार
मायालु पत्नीको निम्ति पनि नपग्लिएको मन
राजेन्द्र स्थापित हो त्चु छेन उर्फ हे छिछेनको जन्म जियाङ्सी प्रान्तको योङशिनमा भयो । बाबु फुजियान जिल्लाका न्यायाधीश थिए तर पछि जागिरबाट निकालिएपछि केही समय सम्पत्ति बेचेर गुजारा चलाए पनि अन्ततः आर्थिक संकटकै कारण शहरमा टिक्न सकेनन् र काँठक्षेत्र योङशिनतिर लागे । १६ वर्षीया हेले स्कुलमा पढ्दै कम्युनिष्ट युथ लिगको सदस्यता लिइन्, अर्को वर्ष सन् १९२६ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता । योङशिनको महिला विभाग… विस्तृत समाचार
प्रत्येक बाबु–छोराले सिकिदिए पो, यस्तो पाठ !
राजेन्द्र स्थापित चिनियाँ क्रान्तिनायक माओले चारपटक बिहे गरे, १० सन्तानको बाबु बने तर तीमध्ये दुई छोरा र दुई छोरी मात्र बाँचे । जीवित छोराहरु माओ आन्यिङ र माओ आन्छिङ दोस्री पत्नी याङ काइहुइका सन्तान हुन् । छोरी जियाओ जियाओ उर्फ लिन मिनकी आमा हे छिछेन थिइन् भने ली नाकी आमा चियाङ चिङ । याङ काइहुइलाई कोमिन्ताङ सरकारले सन् १९३० को नोभेम्बर ४ मा चाङ्सा शहरको… विस्तृत समाचार
राजेन्द्र स्थापित बुटा सिंहको जन्म पञ्जाबको जालन्धरनजिकको गाउँमा भएको हो । युवावस्थामा टेक्नासाथ सेनामा भर्ती भए । सन् १९३९ मा विश्वयुद्ध शुरु भयो । जर्मनीको मित्रराष्ट्र जापानले एशियामा जताततै प्रभाव जमाउन थाल्यो । भारत त्यसबेला ब्रिटेनको अधीनमा थियो । लर्ड माउण्टबेटनको मातहतमा रहेर बुटा सिंहले बर्मामा जापानसित लडे । सन् १९४५ मा विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि सेनाको जागिर छाडेर गाउँ फर्के । गाउँमा सबै सहोदर साथीभाइको… विस्तृत समाचार
कलाकारले गर्न नसक्ने के छ त्यस्तो काम ?
राजेन्द्र स्थापित मेरिक एडबर्ड क्लिफ्टन जेम्सको जन्म पश्चिमी अष्ट्रेलियाको पर्थमा भएको हो । प्रथम विश्वयुद्ध शुरु हुँदा १६ वर्षका थिए, तैपनि बेलायती सेनामा भर्ती भएर फ्रान्सको सोम्मेमा भएको लडाइँ लडे । विश्वयुद्ध सकेपछि चार्ली च्याप्लिनलाई प्रसिद्धीको शिखरमा पु¥याउने नाटक निर्माता फ्रेड कार्नोको संगतमा परेर अभिनयतर्फ लागे । २२ वर्षपछि सन् १९३९ मा फेरि अर्को विश्वयुद्ध शुरु भयो । बन्दुक नउठाउने तर बन्दुक बोक्ने सिपाहीहरुलाई मनोरञ्जन… विस्तृत समाचार
जंगलमा सिद्धिएको एउटा लडाकुको ज्यान
राजेन्द्र स्थापित कम्बोडिया त्यसबेला फ्रान्सको उपनिवेश थियो । सरकारी कुदृष्टि परेपछि जागिरबाट हात धुनुपरेको न्यायाधीशको एउटा परिवार राजधानीमा टिक्नै नदिइएपछि उत्तरी–पश्चिमी प्रान्त बत्तामबाङमा बसाइँ स¥यो । सोही परिवारमा सन् १९२० मा एउटी बालिकाको जन्म भयो, नाउँ राखियो– खिउ पोनरी । १२ वर्षपछि अर्की पुत्री जन्मिइन्, ‘खिउ थिरिथ’ । त्यसबेला देशभरि माध्यमिक विद्यालय एउटै मात्र थियो– लेसी सिसोवाथ । न्होमपेन्हको सो स्कुलमा कुलिन घरानाका छोराछोरी मात्र… विस्तृत समाचार